Ukutshintshiselana okuphezulu kwii-cryptocurrencies | Olona tshintshiselwano lubalaseleyo | Ezezimali
Yonke imihla abantu abaninzi banomdla fumana ii-cryptocurrensets kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. I-Bitcoin yi-asethi ngoDisemba ophelileyo we-2017 enexabiso le- $ 16.000 kunye nenxalenye enkulu yabatyali zimali njengombono wokuba yinxalenye yolu hlaziyo lobuchwephesha kunye nokusebenzisa izibonelelo kunye namathuba anikezelwa zii-cryptocurrensets namhlanje.
Ukurhweba ngeemali zedijithali Ivuselele umdla omkhulu kule minyaka idlulileyo phakathi kwabemi baseSpain. Ngexesha lokugqibela kweenyanga a Iindidi ezininzi zeemali ezintsha zedijithali ezenza ukuba le ntengiso ikhule ibe nkulu kwaye inzima, abasebenzisi abaninzi abafuna ukutyala imali kwi-cryptocurrensets abayi kuyazi indlela yokuqala kunye nokuthenga ii-Bitcoins zabo zokuqala okanye ii-Ethers, ukuba banike izimvo ngezi zimbini zibalaseleyo zedigital ...
Nangona zininzi iindlela zokuthenga ii-cryptocurrencies, eyona ndlela icetyiswayo yokwenza ukuthenga nokuthengisa ii-bitcoins okanye ezinye iicryptos kukusebenzisa amaqonga otshintshiselwano (awaziwa njenge utshintshiselwano Ngegama lesiNgesi) apho abatyali mali banokuthenga khona amathokheni abo okuqala kunye nokulawula iipotifoliyo zabo ze-cryptocurrency. Ezi ziqonga zezi ngokufana nabarhwebi besitokhwe kuphela kukuba endaweni yokuthenga nokuthengisa esitokisini izinto esizithengayo nesizithengisayo yimali yeemali zokukhuphela.
1 Iindidi ezahlukeneyo zotshintshiselwano
9 Loluphi utshintsho onokulucebisa?
Iindidi ezahlukeneyo zotshintshiselwano
Iimarike zingahlula zibe ngamaqela amabini ahlukeneyo otshintshiselwano.
Iinkqubo eziphambili: Abasebenzisi banokuthenga kwaye bathengise ii-cryptocurrensets zabo ngeqonga eliphakathi elisebenza njengomlamli phakathi komthengi kunye nomthengisi ngokutshintshela ikhomishini encinci. Olu hlobo lotshintshiselwano luyafana ngakumbi kubarhwebi besitokhwe sangoku kwaye ngabo balawula umthamo omkhulu weshishini namhlanje. Eminye imizekelo yiKraken, Binance, Kucoin, njl.
Iinkqubo ezisasazwayo: Enkosi kubuchwephesha beBlockchain, isizukulwana esitsha sotshintshiselwano olusemthethweni lubonakala apho ukuthengwa kunye nokuthengiswa kwethokheni kuqhutywa ngokuthe ngqo phakathi kwabantu, iqonga liyinkqubo nje yokubeka omabini amaqela ekunxibelelaneni. Kule meko kuhlala kungekho khomishini (okanye iphantsi kakhulu) kwaye okwangoku ziinkqubo ezingasetyenziswanga kangako kuba imbonakalo yazo intsha. Kule meko, i-IDEX kufuneka ibalaselisiwe njengolona tshintsho lusetyenziswayo kwihlabathi.
Umahluko obalulekileyo phakathi kwezi nkqubo zimbini kukuba iinkqubo ezifakwa embindini zinoluhlobo oluthile lwemali yedatha ekhoyo (ezo zamkelweyo liqonga) ngelixa kwiinkqubo ezisasazwayo olu lawulo alukho kwaye zonke iimpawu zentengiso zinokuthengiswa okoko nje kukho umsebenzisi ozimisele ukuthengisa kunye nomnye oza kuthenga.
Ukuqhubeka ndikubonisa uluhlu kunye neenkonzo zotshintshiselwano ezisebenza eSpain. Uluhlu luqulathe kuphela iinkqubo ezikwindawo enye, kuba amagunya asezantsi ayacetyiswa kuphela kwabo basebenzisi banamava amaninzi otyalo-mali kwii-cryptocurrensets.
I-Coinbase kunye ne-GDAX yayo esemthethweni yeyona nto iphambili ekungeneni kwihlabathi le-crypto kubasebenzisi abaninzi, ukusukela Bavumela ukusebenza ngeeYuro neeDola. Masithi ngokubanzi, ukuba ufuna ukuchitha eyakho Imali yehlabathi yokwenyani kwii-cryptocurrensets, ukusebenzisa iCoinbase yeyona ndlela ilungileyo.
Liqonga ikhuselekile kakhulu, evumela ukuba imali ye-FIAT ifakwe kwidiphozithi zebhanki okanye kwikhadi letyala. Amakhomishini ayo ahlala ephezulu, kodwa njengoko ndisitsho liqonga elikhuselekileyo kwaye lihlawulwe. Ivumela kuphela ukuthenga i-Bitcoin, i-Bitcoin Cash, i-Ethereum kunye ne-Litecoin ke ukuba sifuna ukuthenga ezinye i-cryptocurrencies kuyakufuneka sisebenzise ezinye izinto zotshintshiselwano.
Ukongeza, ngoku kunokwenzeka ukwenza iakhawunti kwiCoinbase kunye fumana i-10 $ yasimahla xa ufaka i $ 100 yokuqala. Yenzelwe yona Kuya kufuneka ubhalise usebenzisa le khonkco kwaye uthumele i-100 yeedola kwiakhawunti yakho.
Okwangoku utshintshiselwano ngesona sabelo sikhulu semarike kunye nevolumu ephezulu yokuthengisa kuko konke okukhoyo. Ayinayo ikhathalogu ebanzi ye-cryptocurrensets, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndlela ilungileyo yokuthengisa zonke ezo zinto zifumanekayo kuba kulapho uzakufumana khona elona xabiso libalaseleyo.
Irejista ihlala ivulekile kuphela ngamaxesha athile ukunqanda ukufumana isithuba sabasebenzisi abatsha. Ukuba ufuna ukubhalisa kwiBinance ungayenza ngokunqakraza kule khonkco.
Olu tshintshiselwano likuvumela ukuba usebenze ngeeYuro nakwiiDola ngenxa yoko lukwasetyenziswa ngokubanzi ukuqala ukusebenza ngee-cryptocurrensets. Yibane Ikhathalogu ebanzi yengqekembe kuneCoinbase, kuba ivumela ezinye ezinje ngeRipple, iDash, Iconomi, njl. kwaye iikhomishini zayo ziphantsi.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo iqonga belingazinzanga kwaye lisebenza ngalo ibikukubandezeleka, kodwa ukusukela ngoJanuwari 2018 benze uhlaziyo lokuzinza kwaye iqonga lisebenza kakuhle kakhulu ngenxa yoko kucetyiswa ngokupheleleyo. Ubhaliso eKraken ungayenza ucofa apha.
Ukucoca kukutshintshiselana Isetyenziselwa ngokubanzi ukuthengisa ii-cryptocurrencies ezisandula ukwenziwa kwaye ezingafikeleleki kolunye utshintsho olukhulu njengeKraken okanye iBinance. Inomthamo ophantsi wokurhweba kunayo yonke eyangaphambili, kodwa lolona khetho lufanelekileyo xa ufuna ukuthenga nokuthengisa ezinye iicryptos ezingaziwayo njengeMatrix, WanChain okanye iWPR ukunika imizekelo embalwa.
Inkqubo yokuqinisekisa ilula kakhulu, ke ukuba ufuna ukubhalisa kwi-Kucoin kufuneka ucofe apha kwaye ulandele onke amanyathelo.
IHitBTC lutshintshiselwano lwamagqala kwaye isebenza kakuhle kakhulu. Iqonga layo lilula ukuyisebenzisa kwaye livumela ukufikelela kwiithokheni ezingafumaneki kwamanye amaqonga kwintengiso, ke abasebenzisi beengcali ze-cryptocurrency bahlala benayo iakhawunti kuyo. Ukubhalisa kufuneka ucofe apha.
Liqonga esetyenziswa ngokubanzi kwimarike yaseMelika ukuthenga nokuthengisa iBitcoins. Isixhobo somelele kakhulu, sisebenza ngeethokheni ezimbalwa kodwa sinomthamo owamkelekileyo wokurhweba.
I-Poloniex lutshintshiselwano olwaludume kakhulu kwi-2016 kunye ne-2017 kodwa ilahlekile ngokubaluleka mva nje. Unemicimbi yezokhuseleko Ke asikukhuthazi ukuyisebenzisa ngaphandle kokuba ufuna ukutyala imali kwi-cryptocurrency efumaneka kuphela kweli qonga.
Loluphi utshintsho onokulucebisa?
Ngokubanzi akukho tshintshiselwano olungcono kunolunye ngandlela zonke ke kunzima kakhulu ukucebisa inye kuphela. Iqonga ngalinye linamanqaku alo aqinisekileyo kunye nokungalunganga kwaye kuxhomekeke kakhulu kwimali esifuna ukuyityala, kuba utshintshiselwano ngalunye luvumela ukufikelela kwikhathalogu ethile yamathokheni. Ngokubanzi, ukuba into oyikhangelayo kukuqala ukuthenga ii-cryptocurrensets zakho zokuqala nge-euro okanye iidola, Ingcebiso yethu kukuba usebenzise iCoinbase, kuba ukusetyenziswa kwayo kuyafana kakhulu nomthengisi wendabuko kwaye oko kuya kukunceda wenze imisebenzi yakho yokuqala ngokuzithemba.
Ukuba kamva ufuna ukurhweba okanye ukuba unomdla wokutyala imali kwezinye ii-cryptocurrensets ezingezizo ezi-5 ezikhoyo kwiCoinbase, Ingcebiso yethu kukusebenzisa iBinance ngokuba ngowona umthamo uphezulu kunye nokhuseleko oluphezulu.
Kodwa njengomgaqo jikelele, abantu abebesoloko betyala imali kwi-cryptocurrensets iminyaka eliqela ngesiqhelo uneakhawunti kuninzi lotshintshiselwano Kuba kukho ezinye iimali ezifumaneka kuphela kunaniselwano oluncinci kunye nolusezantsi, kuhlala kulungile ukuba neakhawunti ilungele ukuba ufuna ukusebenza, ukuze ukwazi ukuyenza ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Izaziso » Ukutshintshiselana ngeemali zedijithali